Sawirro — Sababta guri labadiisa dhinac loo mariyay buundo | Radio Himilo
Home / Deegaan / Sawirro — Sababta guri labadiisa dhinac loo mariyay buundo
Posted by: Mahad Mohamed August 10, 2020
Kaabad ama buundo cusub oo laga dhisay waddanka Shiinaha ayaa soo jiidanaysa indhaha dadyowgaas. Waxaana sheekadeedu ay sameysay hadal-heyn qaran gudaha Shiinaha.
Sababta oo ah waxaa laga dul dhisay guri dherer ahaan u dhuuban oo ninkii lahaa uu iska diiday inuu ka guuro.
Dhaqanka Nail House oo ah in dadka laga daadgureeyo goob cayiman lana dejiyo goob kale si horumarin qaran looga sameeyo waa mid caan ka ah gudaha Shiinaha, laakiin sheekada ninkani waa mid ka duwan taas. Wuxuu iska diiday inuu qaato magdhowga lacageed oo dowladdu siiso dadka guryahoodu kusoo dhacaan hilinka horumarinta iyo dib-u-habeynta. Taas beddelkeeda wuxuu qaatay inuusan meelna uga dhaqaaqin gurigiisa. Sidaas darteed, dowladda waxaa qasab ku noqotay inay labada dacal ee gurigiisa dul mariso buundo highway ah.
Ms. Liang, oo ah mulkiilaha guriga oo cabbir ahaan dhan 40 mitir oo wareeg ah, wuxuu sheegay inuusan ku qancin qorshaha dib-u-dejinta oo dowladdu ay usoo bandhigtay. Waa qof kale oo aan qaadan magdhowga cawil-celineed oo dowladdu ay dib-udejinta ugu sameysay 47 ruux oo halka deganaa. Liang, marka laga soo tago, intii kale waxay goobta isaga guureen Septembertii hore.
“Waxay idin la tahay halkani inay buuq badan tahay, waxaase aan ku dareemaa deganaan, xurnimo iyo negaadi,” ayay tiri – iyada oo sheegtay inaysan dheg jalaq u siineyn hadallada uga yimaada dadka intiisa kale.
Marka loo eego South China Morning Post, dowladdu maheli karin doorasho kale oo aan ka ahayn inay buundada ka dul dhisto guriga haweeneydan, madaama ay iska diiday inay qaadato magdhow gaaraya 1.3 million yuan ($186,500). Taas beddelkeeda waxay dalbatay inay hesho 2 million yuan ($287,000) iyo sidoo kale afar ‘apartments’.
Marka ay dowladdu ku gacanseyrtay heshiiskii ay usoo bandhigtay mulkiilaha guriga, waxaa loo jeestay in laga howlgalo dhismaha buundada. Si kastaba, waxay sheegtay in wada-hadalku aanu halkaas ku idlaanin, walina ay rajeynayaan inay is afgarad ka gaaraan xalka arrintan.
Dad badan oo ka aragti dhiibtay sheekada haweeneydan ayaa faallooyin dhaleeceyn u badan ka bixiyay.
Previous: Atletico Madrid oo u dhaqaaqi karta Lucas Torreira
Next: Chelsea oo suuqa ku kharash gareynaysa £200m